Kaaliyaha sahayda ayaa caawiya hay'adaha daryeelka caafimaadka waqtiga dhiman
Wadnaha oo la shaqeeya dadka
Waxaad baraneysaa inaad caawiso shaqaalaha kalkaalinta, sida markaad cuntada ka codsanaysid iyo qolalka iyo alaabooyinka kala duwan, isbeddelka iyo labiska sariiraha. Waxa kale oo aad baran doontaa sida loo hagaajiyo shaqaaleynta animation-ka, waxaadna baran doontaa dhammaan qaybaha daryeelka caafimaadka.
Waxaad tahay bulsho ah
Waxaad nadaafad shaqeeyaan
Een tababarka sahayda shaqaalaha qaadataa laba ilaa saddex sano.
Waxaad isku dari kartaa barnaamijka waxbarashada si aad u daryeesho.
Waxaad wax kasta oo aad hore u helay in tababar hore (tusaale feed-daryeelka) ka tagi karo tirin sida xirfadaha kasbadeen.
Looma baahna aqoon gaar ah oo gaar ah. Maxay muhiim u tahay dabacsanaanta la shaqeynta dadka.
Adoo ah kaaliye saadal ah, waxaad awoodi doontaa inaad ku siiso taageerada hawlaha logistikada xarumaha kala duwan. Tusaale ahaan: dayactirka, adeegga cuntada, qolalka iyo meelaha lagu noolaado, iwm.
Waxaad ku bilaabi kartaa shahaadadan, laakiin koorsadan waxaa loogu talagalay sidii barnaamij horudhac ah oo loogu tala galay waxbarashada qurxinta, daryeelka khibradda of Fududeeye ee Carruurta.
Muxuu shaqaale xirfad leh u qalmaa?
Intee in le'eg ayaad ku kasbatay sida shaqaalaha sahayda ku shaqeeya waxay si weyn ugu tiirsan yihiin goobtaada shaqada iyo haddii ay ka shaqeyneyso isbeddel iyo / ama shaqo fasax ah. Haddii aad rabto faahfaahin dheeraad ah, la xiriir la-taliye shaqo tababarkan.
Ka dib markii kaaliyaha agabyada tababarka ee aad tababar ku sameyn kartid barnaamijka qurxinta, daryeelka khibradda of Fududeeye ee Carruurta.
Tababarka Tababarka Sare ee Shaqaalaha Waqti-Dheerka ah
Waxaad ka shaqayn ka dib Kaaliyaha Tababaraha Sare iyada oo la kormeerayo daryeelayaasha. Waxaad taageertaa kalkaaliyayaasha iyo daryeelayaasha adigoo fuliya hawlo badan. Kuma qaybqaadan kartid daryeelka bukaanka. Tababarka Kaaliyaha Saadka waa tababarka talaabo tallaabo tallaabo ah tababarka daryeelka. Kadib, waxaad ku takhasusi kartaa barnaamijka daryeelka khibradda.
Ardayda leh waayo-aragnimo aan horumariyo track a dhakhso ah. Waxaad xaq u leedahay haddii aad tusaale ahaan. Haddii sanadkii afaraad Nafaqada-Daryeelka raacno.